Mmejuputa Amazon S3 maka WordPress Blog | Martech Zone
Cheta na: Kemgbe edere ihe a, anyị akwagala ọzọ Flywheel na a Nzipu Nwepụta ọdịnaya kwadoro Site StackPath CDN, CDN ngwa ngwa karịa Amazon.
Ọ gwụla ma ị nọ na ntanetị, usoro nnabata ụlọ ọrụ, ọ na-esiri ike ịnweta arụmọrụ ụlọ ọrụ na CMS dị ka WordPress. Ibu oke, nkwado ndabere, nnabata, mmegharị, na nnyefe ọdịnaya anaghị abịa ọnụ ala.
Ọtụtụ ndị nnọchi anya IT na-ele nyiwe dị ka WordPress ma jiri ha n'ihi na ha free. Free bụ onye ikwu, ọ bụ ezie. Tinye WordPress na ihe eji enweta ụlọ ọrụ Bochum na narị ndị ọrụ nwere ike iweta saịtị gị ka ị kwụsị. Iji nyere aka na arụmọrụ nke blọgụ m, n'izu a, m gbanwere ntinye m nke WordPress na-ese ihe eserese niile sitere na Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service). Nke a na-ahapụ ihe nkesa m ka ịkwanye HTML site na PHP / MySQL.
Amazon S3 na-enye interface ọrụ ntanetị dị mfe enwere ike iji chekwaa ma weghachite data ọ bụla, n'oge ọ bụla, site na ebe ọ bụla na weebụ. Ọ na - enye onye nrụpụta ọ bụla ohere ịbawanye akụrụngwa, ntụkwasị obi, ọsọ ọsọ, akụrụngwa nchekwa data nke Amazon jiri na-agba ọsọ nke ntanetị zuru ụwa ọnụ nke saịtị weebụ. Ọrụ a bu iji bulie elele nke oma na inye ndi okacha amara ndia.
Iji gbanwee saịtị maka Amazon S3 were obere ọrụ, mana ebe a bụ isi:
Debanye maka Amazon Web Services.
Buru Firefox Tinye maka S3. Nke a na-enye gị nnukwu interface maka ijikwa ọdịnaya S3.
tinye a ịwụ, na nke a, agbakwunyere m www.madaga.se.
Add a CNAME gị na ngalaba na-edeba aha na-arụtụ a subdomain gị na saịtị ahụ ka Amazon S3 maka mebere Bochum.
Ibudata ma wụnye ngwa mgbakwunye WordPress maka Amazon S3.
Setịpụ AWS Access Key ID na Nzuzo Igodo ma pịa melite.
Họrọ subdomain / ịwụ gị kere n'elu maka Jiri bọket a nhazi.
Nzọụkwụ ndị ọzọ bụ akụkụ ntụrụndụ! Achọghị m ijere ọdịnaya S3 ozi n'ọdịnihu, achọrọ m ijikwa ọdịnaya niile, gụnyere mgbasa ozi, isiokwu, na faịlụ mgbasa ozi gara aga.
M kere nchekwa maka mgbasa ozi, themes, na uploads n'ime bọket m na S3.
Enyere m ọdịnaya m niile dị ugbu a (onyonyo na faịlụ mgbasa ozi) na folda ọdabara.
M gbanwetụrụ m CSS faịlụ m isiokwu sere niile oyiyi si www.martech.zone/cheghari.
Emere m a MySQL ọchụchọ ma dochie na emelitere ọ bụla zoro aka na ọdịnaya mgbasa ozi iji gosipụta site na subdomain S3.
Emelitere m ederede ederede niile maka mgbasa ozi iji gosipụta na folda mgbasa ozi na S3 subdomain.
Site na ebe a pụọ, Naanị m chọrọ bulite mgbasa ozi na S3 kama iji akara ngosi ndabara maka bulite mkparịta ụka maka WordPress. Ihe mgbakwunye ahụ na-arụ ọrụ dị egwu na itinye akara ngosi S3 n'otu ebe nke Bulite / Fanye akara ngosi na nchịkwa WordPress.
Kwaga data niile ma na-agba ọsọ na S3 maka ụbọchị ole na ole ugbu a emeela $ 0.12 na ebubo S3, yabụ echeghị m banyere ụgwọ metụtara - ikekwe dollar ole na ole kwa ọnwa bụ ihe ọ ga-efu. N'akụkụ ndị ọzọ, ọ bụrụ na m nweta ton nke ndị ọbịa, m kwesịrị inwe ike ijikwa ọtụtụ karịa usoro ikpo okwu ugbu a. Saịtị m na-ebọnata ihu akwụkwọ mbụ n'ihe dị ka 40% nke oge ọ na-adịbu, ya mere enwere m obi anụrị na ịgagharị!
Ihe kachasị mma banyere njem a bụ na ọ chọghị mmepe ọ bụla!
Tags: amazonamazon s3ịde blọgụnetwọk nnyefe ọdịnayaife efemaxcdnweta
Mụ, Mụ, M na Social Media
Enwere m akaụntụ Amazon S3, mana mgbe m gbalịsịrị ịchọpụta ihe, m hapụrụ ya n'ihi na ọ siri ike. Firefox addin maka S3 na-eme ka ọ dị mfe karị?
Ihe mgbakwunye Firefox ahụ bụ n'ezie akụkụ dị mkpa nke mgbaghoju anya. Ikwesiri inwe ịwụ ebe tupu ngwa mgbakwunye arụ ọrụ - yabụ na-eme ya ọnyà.
M ga-agbakwunye, ikwesiri igosi gi CNAME ohuru Aha_unique_cloudfront_distribution_name.cloudfront.net kama ka Uchechukwu_nkechi.s3.amazonaws.com. Ma mgbe nke ahụ gasịrị, ị na-emeso ya dịka ịwụ S3 nkịtị.
Ọ na-efu karịa mgbe ị na-eji nhọrọ ọsọ CloudFront dị elu / ala dị ala karị. Ọ bụrụ na ị kpebie na ị ga-achọ ịlaghachi n'ụdị S3 ọkọlọtọ, gbanwere CNAME gị ka ọ kọwaa s3.amazonaws.com kama.
Ihe dị ka otu afọ gara aga, edere mhttp://www.carltonbale.com/tag/amazon-s3/"a ole na ole blog posts na Amaon S3 maka onye ọ bụla nwere mmasị.
Jun 23, 2009 na 10:31 AM
Ọ bụrụ n'ị na - achọ ịrị elu karịa ọsọ, gbanye Amazon S3 Bucket gị n'ime bọket Amazon CloudFront, nke na - emepụta ezi ọtụtụ sava zuru ụwa ọnụ, Ntanetị Nkesa Ọdịnaya Ntanetị dị ala. Lee njikọ ya na nkọwa niile: http://aws.amazon.com/cloudfront/faqs/
Ọzọkwa, wp-supercache ngwa mgbakwunye nwere ike inye nnukwu ọsọ na-abawanye na elu-okporo ụzọ saịtị dị ka ọ na-ebelata CPU ibu na nchekwa data oku.
Jun 23, 2009 na 11:35 AM
Dị jụụ, Carlton! Yabụ na ọ bụ netwọkụ ekesara dị ka Akamai. Amaghị m na ha nwere nke ahụ! Enwere m ike irite uru mgbe m hụrụ ụfọdụ ụgwọ.
Enweela m caching na wp nyeere tupu, mana enwere m ụfọdụ ọdịnaya dị ike nke mere m ji gbalịsie ike na ya ebe ọ bụ na ọ ga-echekwa ọdịnaya m oge ụfọdụ na m chọrọ ibu ezigbo oge.
Jun 23, 2009 na 11:45 AM
Site na nkọwa ha ọ dị ka Amazon na-eme ihe dị iche iche, ha na-ekwu:
“Amazon CloudFront na-eji ọnọdụ iri na anọ na isi ahịa zuru ụwa ọnụ. Asatọ nọ na United States (Ashburn, VA; Dallas / Fort Worth, TX; Los Angeles, CA; Miami, FL; Newark, NJ; Palo Alto, CA; Seattle, WA; St. Louis, MO). Anọ dị na Europe (Amsterdam; Dublin; Frankfurt; London). Abụọ dị na Asia (Hong Kong, Tokyo). ”
Ha na-eji ohere ịntanetị eme ihe iji mee ka mmekọrịta ha na onye ọrụ njedebe bụrụ ebe CDN dị ka Akamai nwere sava nke dị nso na onye ọrụ njedebe na-abụkarị n'ime netwọk ISP.
Amazons ụzọ isi mee ya bụ Akamai dị ọnụ ala ma dịkwa irè karị.
Jun 23, 2009 na 11:36 AM
Agaghị m ekwu ya? S siri ike “na-enterprise arụmọrụ na a CMS ka WordPress.”
Ihe a niile bụ otu ị si ahazi akụrụngwa gị ma ọ bụ otu ị si anabata CMS gị.
Wayzọ ejiri dee koodu CMS n'onwe ya nwekwara ike rụọ nnukwu ọrụ na arụmọrụ ya dịka Carlton gosipụtara site na iji wp-supercache ngwa mgbakwunye.
Ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na arụ ọrụ nke wp-supercache ngwa mgbakwunye e wuru ya na wordpress site na mmalite - mana nke ahụ ga-achọ ịde ederede n'ihu. Kedu ihe bụ lightpress.org mere.
Gbanyụọ itinye ọdịnaya dị ka S3 bụ ụzọ dị mma iji wepu nhazi na nnyefe site na isi nkesa. Ọ bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa mma nke ịbanye n'ime Amazons akụrụngwa iji bulie ihe dị elu mana ozugbo ị rutere n'ọnụ ụzọ mgbochi, Amazon ga-amalite ịdị oke ọnụ ma ọ ga-adị ọnụ ala karịa ịme ya n'ụlọ ma soro CDN.
Anọ m na-eche banyere ọnọdụ ahụ ntakịrị, ọ bụrụ na naanị ndị 100 zukọrọ ma nye onyinye kwa ọnwa ọnụahịa nke ezigbo sava ha ga-akwụkarị maka ha nwere ike iwuli / jikọta akụrụngwa nnabata nke nwere ike ijikwa ihe ọ bụla.
$ 0.12 maka di na nwunye mbụ nke ụbọchị S3 ọrụ. You ga-agaghachite isiokwu ahụ na ọnwa ole na ole wee gosi ụfọdụ stats nke okporo ụzọ yana ụgwọ? Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ka ọnụọgụ ego a na-efu ndị ọbịa pụrụ iche na imegide ụgwọ mgbasa ozi ma ọ bụ ntinye ndị ọzọ
Kpamkpam! Ga - ekekọrịta kwa ọnwa na kwa afọ kwa mgbe ụgwọ ndị ahụ ga - abata!
Dec 22, 2011 na 12:36 PM
Ọ meela afọ ole na ole ugbu a… mmelite ọ bụla?
Dec 22, 2011 na 12:40 PM
Ee - notice hụrụ m ikpe mbido? Ọrụ S3 nke Amazon dị ntakịrị nwayọ wee buru anyị gawa MaxCDN dị ka CDN anyị ma hụ ya n'anya!
Dec 22, 2011 na 1:32 PM
Ọ dị m nwute; nke ahụ abanyeghị m. Daalụ.
Jul 22, 2009 na 9: 14 AM
Ọ bụrụ na ị bụ Windows ị nwere ike iji S3 Nchọgharị - http://s3browser.com iji bulite faịlụ, dị ka ihe oyiyi, edemede, wdg na Amazon S3. Ga-enwe ngwá ọrụ.
Na ekele maka uru bara uru!
Aug 21, 2009 na 2: 31 AM
Amazon S3 bụ ọrụ dị ezigbo mkpa. Anọ m na usoro nke ijikọ ya na CMS. Naanị otu okwu nke m si na mmepe anya pụta, ọ bụghị nke ọrụ ọrụ Amazon, bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ka onye ọrụ gị bulie faịlụ ahụ ozugbo na S3 site na POST ma ị nwere ọtụtụ ụdị nke na-etinye ederede ederede maka mpaghara gị nchekwa data, ị rapaara. Eitherkwesiri ikewapụ ya n'ụdị abụọ, ma ọ bụ gbalịa jiri ajax bulite faịlụ ahụ mbụ wee nwee ihe ịga nke ọma wepụta data na mpaghara.
Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe ngwọta ka mma, nweere onwe gị gwa m: o)
Ka o sina dị, ego echekwara maka nnabata nnukwu faịlụ dị elu na-akwado mmepe nke sistemụ dị otu a.
Mkpokọta Nchịkwa Ndọtị
Onye edemede Scott Judson
Ọkt 26, 2010 na 10:15 PM
Akwa dee. Agabigawo m ka ị na-akọwa, mana na ngalaba nchịkwa m ebe m na-ebugo ihe oyiyi, anaghị m ahụ bọtịnụ S3. Achọpụtala m na ihe oyiyi m, mgbe a na-ebugo ha na-ejedebe na Amazon, ọ pụtara na enwere m ike i canomi ihe oyiyi m niile ma hichapụ ndị ahụ na sava ahụ?
Na m kwesịrị gbanwee ebe ihe oyiyi m si ma ọ bụ ngwa mgbakwunye ọ na-eme nke a?
Ọkt 26, 2010 na 11:29 PM
Ga-ahụ obere nchekwa data na-achọ akara ngosi n'aka nri nke akara ngosi ahụkarị. Nke ahụ bụ akara ngosi iji gbapụta windo Amazon. M kpaliri wp-content / uploads na Amazon ma gbaa mbọ hụ na m nwere otu ụzọ… naanị ihe dị iche bụ subdomain. Ha nọ na http://www... ma ugbu a, ha nọ na images.marketingtechblog.com. Mgbe m depụtachara onyogho niile ahụ na Amazon, ejiri m PHPMyAdmin wee mee nchọta wee dochie src = ”http://martech.zone ma were src =” images.marketingtechblog.com dochie ya. (https://martech.zone/wordpress/mysql-search-replace/)
Nwere olileanya na-enyere aka! Ọ bụghị enweghị nkebi, ma ọ na-arụ ọrụ.
Ọkt 31, 2010 na 2:03 AM
Hey Douglas, daalụ maka nke ahụ, emelitere m DB ka ihe oyiyi niile na-atụ aka n'ihe oyiyi., Mana m na-ahụ ụfọdụ mkpịsị aka aka (mgbe elere anya na peeji nke peeji) na-egosi iamge ka na www.
Nke a bụ saịtị ahụ (www.gamefreaks.co.nz) - a, alos nwere ụfọdụ isi ihe ncheta maka ihu ihu, naanị malitere ozugbo anyị gbanwere Bochum, yabụ ugbu a, m na-ele anya na-ewepụ ụfọdụ nrụgide nnabata na S3. 😎
Nov 3, 2010 na 4:57 PM
ị maara ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ibugo naanị na S3 na-enweghị na-echekwa otu nnomi na sava mpaghara?
Nov 3, 2010 na 6:08 PM
Ndewo Scott, ngwa mgbakwunye S3 na-enye ụzọ nke ya ozugbo na Amazon, yabụ, echeghị faịlụ a na mpaghara.
Feb 16, 2011 n’elekere 5:37 nke abali
Nke a wordpress ngwa mgbakwunye “onye ị kwuru”
Na-arụ ọrụ na ụdị kachasị ọhụrụ nke wordpress?
Ga-enwe nnukwu mmasị ịmara ma ọ dakọtara, n'ihi na echeghị m na emelitere ya n'oge. Ekele maka enyemaka
Feb 16, 2011 na 9:02 PM
Ọ dakọtara na nsụgharị kachasị ọhụrụ, mana anaghị m ekwu eziokwu na ọ naghị arụ ọrụ ọ bụla - ị ga-agbanwe ma bufee ihe onyonyo niile na S3 site na usoro dị iche. Anyị nwere ike ịmepụta njikọ CDN siri ike karị (Network Delivery Network) na WP nke na-arụkọ ọrụ kama ịchọ usoro dị iche.
Feb 16, 2011 na 9:13 PM
Akwa post! Adị m ntakịrị ihe ọhụrụ na nke a, ma amaghị m na ị nwere ike ibudata mgbasa ozi. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya. Daalụ maka ịkekọrịta!
You ma ma nke a na - arụkwa "Bọket Mpụga" kwa? Achọrọ m ịtọ ntọala a maka blog nke enyi m ma hapụ ya ka ọ jiri bọket na akaụntụ AWS m (M meworị akaụntụ onye ọrụ maka ya wee nye ya ohere ịbanye na otu bọket m site na iji ngwaọrụ Amazon IAM).
Akwa isiokwu! Daalụ maka ikenye. O nyeere m aka ịtọlite ​​ma na-agba ọsọ.
Enweghị m ike ịnweta igodo nzuzo Amazon ị nwere ike inyere m aka
Celia, gaa n'ụlọ AWS http://aws.amazon.com/ na n'okpuru “Akaụntụ M / njikwa” wedaa, họrọ “Nche nzere.” Banye ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Site n’ebe ahụ, pịrịgaa na nnweta nnweta ma ị ga - ahụ Ndenye Ndenye Access gị. Detuo otu n'ime ihe ndị ahụ maka igodo ID maka ngwa mgbakwunye a, wee pịa njikọ "Gosi" iji hụ Isi Nzuzo Nzuzo dị ogologo. Detuo nke ahụ ma mado ya na ntọala ngwa mgbakwunye. Ikwesiri idozi ihe nile mgbe nke ahu gasiri!
You nwere ike ịgwa m ga - esi nweta igodo nzuzo Amazon maka ngwa mgbakwunye ebugharị ọzọ biko
Daalụ maka usoro na Ama! Ọ dị ka ezigbo nchekwa nchekwa. Ego ole ka ọ na-eri kwa ọnwa na nkezi? Daalụ!